musha Asia Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemuIndian Cricketer anozivikanwa kwazvo nezita rekuti ""Chiku“. Yedu Virat Kohli Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe pakati pevanhu vakanakisisa vanotakura panguva ino. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga nezveVirat Kohli's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Virat Kohli akaberekwa musi we 5th waNovember 1988 ku Delhi, India. Akazvarwa somuduku kuna vana vatatu vakaberekerwa naamai vake Saroj Kohli (mudzimai wemba) uye kuna baba vake Prem Kohli (gweta rezvemhosva).
Nezvemhuri yake, Kohli nderudzi rwechiIndia rwechiPunjabi rudzi rwakaberekerwa na vanasekuru navanasekuru kuIndia pakusikwa kwePakistan.
Young Kohli akakurira mu Uttam Nagar resident yeWest Dehli pamwe chete nehanzvadzi dzake, Vikash (hama) uye Bhavna (hanzvadzi).
Sezvo aiva muduku pane vose vehama, Kohli aifarira vabereki vake vakanga vachimufarira uye vasingadi.
Kohli ainyanya kuswedera pedyo naPrm (baba vake) avo vakawana zvaaifarira mukatekete paakanga ava nemakore ekutanga 3.
Ivo vaviri vaiwanzo ridza kiriketi kusvikira Prem aona zvakakodzera kupa Kohli kuda kwakakwana nzvimbo yekutaura nekunyoresa panguva iyoyo 9-gore-gore chubby mwana kuWest Delhi Cricket Academy.
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Kohli akawana dzidzo yake yekutanga kuVishal Bharti Public School kuDhihli. Yaiva pachikoro kuti akabatanidza kudzidza nekutamba kriketi kuWest Delhi Cricket Academy, pasinei nenguva dzinopesana.
Cricket prodigy yakadzidza paBharti Public School kusvika giredhi yepfumbamwe isati yasvika kuWescue Convent Secondary School kuDhihli.
Kusiyana neyaimbove, Saviour Convent Sekondari aive nenguva dzekudzidza dzakakodzera kumisikidzwa kwekudzidzira kwaKohli kuWest Delhi Cricket Academy.
Nokudaro, akaita zvakanaka kwazvo pachikoro ichi chichiratidzira chimiro chekuti mudzidzisi wavo ipapo Rajkumar Sharma anoyeuka nenzira inotevera:
“Akakwenenzvera tarenda. Akanga ari echisikigo mune zvese zvaaiita uye ndakanyanya kufadzwa nemaitiro ake. Aive akagadzirira kurova chero nzvimbo, uye ini ndaitofanira kumusundidzira kumba mushure memasangano ekudzidzisa. Akanga asingadi kuenda. ”
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Paakapedza chikoro chake chesekondari, Kholi akatanga basa rakasimba mucricket. Nhoroondo yake panguva iyoyo yakaita kudhura Delhi Under-15 team mu 2002 uye kutungamirira boka panguva yekubatanidzwa kwayo ku2003-04 Polly Umrigar Trophy.
Kuenderera mberi Kwebasa Rokutanga Endeavors akaona Kohli akawana foni-kuDhihi Under-17 team ye 2003-04 Vijay Merchant Trophy, simudza chikwata neboka mu 2004-05 uye yakagamuchira nzvimbo muIndia Under-19 squad panguva yekushanya kwayo yeEngland mu2006.
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Makore maviri gare gare (2008), Kohli akawana mukurumbira wenyika dzose paakatungamirira boka reIndia kukunda mu2008 ICC Pasi-19 Cricket World Cup kuMalaysia.
Ikusimbiswa kwakagadzirwa vazhinji vekutanga sachigaro franchises vanoedza kuchengetedza huduma dze Kohli kusanganisira Royal Challengers Bangalore iyo yaakasaina.
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Kohli iye zvino anonakidzwa neukama hwemhuri nemudzimai wake Anushka Sharma. Tinokutaurira urongwa hwehukama hwake hwekare nehuwandu hwehukama hwepano hweMhuri.
Nezve hukama hwaKoli hwekare akambodanana nehunhu hunoshamisa hunosanganisira Sarah-Jane Dias (An mutambi) uye Sanjana (An mutambi).
Jane Dias (Kuruboshwe) uye Sanjana (Kurudyi).
Vamwe hukama hwake naTamannah Bhatiya (An Actress), uye Izabelle Leite (A Brazilian model).
Tamannah Bhatiya (Kuruboshwe), uye Izabelle Leite (Kurudyi).
Kohli akasangana nemukadzi wake wazvino Anushka Sharma mu2013 panguva yeTV kushambadzira shampoo brand uye yakabatana ipapo.
Vakatora makore mashomanana vasati varoora muna December 2017.
Kuroora kwaKohli neHitlywood actress kuchiri pane zvishoma zvayo. Vana vanotarisirwa kuuya sevanhurume sevanopemberera mhemberero dzavo.
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Virat Kohli akaberekerwa mumhuri yevashanu. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Pamusoro pababa vake: Prem Kohli ndiye baba weiyo cricketing genius. Yaive Prem uyo akasimudzira kuda kwaKohli kwekiriketi uye akaona kune kwake kudzidziswa kufarira.
Nehurombo, Prem akafa muna 2006 nekuda kwekurohwa nehuropi mushure mekurara pamubhedha kwemwedzi. Makore gare gare Kohli akazivisa chinyanya kukosha chidzidzo cheupenyu chakadzidziswa nababa vake achibhadhara mutero.
“Kubva pakutanga chaipo, akandidzidzisa kushanda nesimba, kuva nekutenda kwekupedzisira mukushanda kwangu nesimba uye kusatsvaga chero kupi zvako rubatsiro. Chidzidzo ichocho ndicho chakakosha chehupenyu hwangu izvozvi. Akanditungamira munzira kwayo ”.
Pamusoro paamai vake: Saroj Kohli ndiye mukadzi ari shure kwekubudirira kukuru kwemwanakomana wake uye muumbi akaumba hunhu hwake. Semagumo. Kohli haatombopotsa mukana wekupemberera amai vake avo vaitarisira mhuri panguva yakaoma panguva yekufa kwemurume wake.
Pamusoro pevakoma vake: Virat Kohli ane vakoma vaviri mukoma Vikash (mukoma) naBhavna (hanzvadzi). Vikash akakura cricket ine rudo asi haana kumbowana mukana wekuita matanho akakura mumutambo. Akaroora nevana.
Bhavna, kune rumwe rutivi, aigara achikoshesa mukoma wake wechidiki uye anochengetedza ukama hwepedyo naye.
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Untold Career Facts
Kusimba kwepfungwa kwaKohli uye kungwara kwepfungwa zvakamboiswa muyedzo mu2006 panguva yekufa kwababa vake. Kunyangwe iye batsman asingatyi akarwadziwa, akabatsira kuponesa timu yake kubva mukukundwa mumutambo wakakosha zuva raitevera.
Hapana munhu anoyeuka chiitiko ichi zvirinani kupfuura mudzidzisi waKohli wehudiki uyo akaburitsa pachena kuti:
“Akandidaidza, achichema, achiti 'baba vangu havasisipo'. Ndakarohwa nehana nekuti anga ave shamwari yangu yepedyo. Akabvunza, 'Chii chandingaite? Ndiri kurova pa40-odd uye Delhi iri munyatwa huru. Ndinoda kurova. ' Saka ndakamukurudzira kuti atambe. Ndikati ino ndiyo nguva yekuratidza kuzvipira kwako, uye akazviita. Izvo zvaive zvakaomarara kumwana mudiki aive nababa mutumbi wake wakarara mumhuri uye iye akange aenda kunotamba mutambo wecricket. Izvi zvinoratidza kuzvipira kwake kuita cricket nechikwata chake. ”
Nepo nyaya iyoyo ichisimbisa Kuzvipira kwaKohli kumutambo, pane nguva yaakaratidza kuve mutyori wekokorodzano nekugara nemukadzi wake pahotera imwechete kunyangwe paine mutemo waimurambidza kuita saizvozvo pamberi peMutambo Wenyika we2015 muAustralia.
Mune chimwe chiitiko, akakundikana kuratidzira simba rehupenyu kuburikidza nekuita chiito nemunwe wake wepakati kumapoka evanhu vakamushungurudza mumusambo panguva yemutambo wake wokutanga kuAustralia mu2011.
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Kubvumira uye Kuzvipira
Kohli ane mumiriri we 20 uye mabhizinesi mashomanana. Kutanga nezvibvumirano zvaanoita nemakwenzi anosanganisira: American Tourister, Audi, Boost, Colgate-Palmolive, Gillette naHerbalife.
Zvimwe zvinosanganisira izvo zvaakasaina naMFF, Manyavar, New Era, Puma, Punjab National Bank, Tissot, Uber, Vicks uye Gionee.
Nezve kudyara kwake ega, Kohli ane yake yekudyira muNew Dehli inonzi "Nueva", yeLondon based tech kutanga-up inonzi Sports Convo, uye fashoni brand inonzi Yakashata.
Zvimwe zvinosanganisira ketani yekuzvidzivirira uye nzvimbo dzakanaka dzinonzi Chisel Gyms. Iye ariwo mutengi we tennis franchise UAE Royals neIl team, FC Goa.
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hwehupenyu
Kohli muIndia anonakidza ane hukuru hwemunda. Zvimwe zvinonakidza zvinosanganisira kufamba kunoshanda nekuimba. Kunze kwecricket, Kohli anofarira tennis uye iye ari mukana mukuru we Roger Federer.
Anodawo ma tattoos uye ane unyanzvi hwehutano hunoramba huchiwedzera. Chinokosha pakati pezvigadzirwa izvi chiratidzo chinonzi 'ziso raMwari' kuruboshwe rwake rworuboshwe. Inofananidzira simba rekuona kukuru uye kunzwisisa.
Pamusoro pechechi yake yekurudyi ndiko kwakanyorwa kweForpion iyo inomiririra chiratidzo chake chezodhiac. Zvimwe zviratidzo zvishoma zvinoratidzika ndezve 'Japanese Samurai warrior' achifananidzira kuzvidzora uye kuremekedza pamwe neimba yemamende inomirira rugare.
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Kohli anoda motokari uye ane guru rakakura reModhi Audi models kusanganisira Audi Q7, Audi S6, Audi R8 V10, Audi R8 LMX, Audi A8L W12 Quattro.
Ane imba yakanakisa iyo haingosangana chete nekudzidziswa uye kunyaradzwa kwezvinodiwa asi ine dzimba dzekutarisirwa kwemhuri inotarisirwa.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Virat Kohli Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!